Bayavevezela othisha abasukele uNyazilwezulu | isiZulu
Bayavevezela othisha abasukele uNyazilwezulu
Abantu banxanelwe ukukholwa...
Bayamvuma uShembe wabo
Kwasayina iNkosi uShembe - Uchwepheshe
Durban - Isisuka ngezinhlangothi zawo uqobo amaNazaretha indaba yokuhlukunyezwa kwabafundi ezikoleni njengoba kuthiwa kukhona abanqatshelwe ngunogada ukungena esikoleni ngoba bekhonza eBuhleni - okuwuhlangothi oluholwa yiNkosi Mduduzi "Nyazilwezulu" Shembe - hhayi eThembezinhle eholwa yiNkosi Vela "iMisebeyelanga" Shembe.
Bakhathazekile abazali bezingane ezifunda eSiphondweni High School eMboza KwaMhlabuyalingana, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal okubikwa ukuthi abantwana babo bahlangabezane nezimbila zithutha batshelwa kwezikabhoqo ukuthi ngeke besavunyelwa ukufunda kulesi sikole uma belokhu beqhakambisa ukuthi bangabalandeli boNyazilwezulu.
ILANGA lithole ukuthi laba bafundi abayisi-8, batshelwe ukuthi uyedwa umholi ogunyaziwe (yinkantolo) ukuba bamlandele, yiMisebeyelanga.
Kuvela ukuthi kwale ngisho sebephelezelwa ngumfundisi waleli bandla eMboza, uMnu Sozabile Mthembu njengoba kwayena etshelwe kwezikabhoqo ngunogada wesikole - ILANGA elinalo igama lakhe - ukuthi "ngeke kuvunyelwe abafundi abalandela umkhohlisi (uNyazilwezulu)". Lokhu kuthiwa ukusho ebambisene nothishanhloko.
Amalunga aleli bandla athi akhathazekile ngesenzo sezisebenzi zoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ngoba sesiside isikhathi zinxuswa ukuba ziyeke ukuhlukumeza abafundi ngokwenkolo yabo, ikakhulukazi abangamaNazaretha, okubikwa ukuthi badonswa ngezinwele kuthiwe ngamahlathi agcwele izintwala ezibenza babe yizidomu bangaphumeleli ezifundweni.
ILANGA livakashele eMboza lapho lizibonele imivimbo esabisayo egcwele umzimba womfundi othe ushaywe nguthishanhloko maqede wamephuca ifodo elinobuso boNyazilwezulu.
"Njengoba ungibona nginjena nje, akimina ngedwa sibaningi. Simthola esesilinde (uthishanhloko) esangweni lesikole, akabuzi lutho ufike athi niqhubeka nale ngqondo yenu, kukhale isibhaxu. Siyahlukumezeka kulesi sikole (eSiphondweni)," kusho yena.
NgoMgqibelo leli phephandaba lihambele igatsha lebandla lamaNazaretha eliseMakhanisi lapho kubikwe ukuthi kunothisha ababili besifazane abafundisa eMakhana Primary School abahlukumeze abafundi, babathela isibhaxu bebaphoqa ukuba bagunde amakhanda.
Kuthe uma bengawagundi, labo thisha bakhipha umyalelo wokuthi babuye nomkhokheli webandla ozochaza kabanzi ukuthi kungani bengagundi. Kuthiwa ngaphandle kokubiza umkhokheli, banxuse abafundi ukuba babuye noNyazilwezulu ukuba luyothatha ushoki lufundise bona bodwa.
UNkk Sonteni Ndlovu ongumkhokheli waleli bandla, unikele khona esikoleni waphenduka inhlekisa ngesikhathi labo thisha bebukisa ngaye phambi kwezingane nozakwabo. UNkk Ndlovu utshele leli phephandaba ukuthi uyedwa uthisha okhombise ukuzisola, oyedwa wamhleka elokhu embeka amabala.
"Ngibuya khona esikoleni kodwa okungizwisa ubuhlungu wukuthi zisale zashaywa izingane kwathiwa luphi uNyazilwezulu okufanele luyothatha ushoki lufundise bona bodwa. Sicela uhulumeni ulusukumele udaba lwethu, kungenjalo kuzophazamiseka okuningi ngoba sesifike lapho sikhathala khona," kusho uNkk Ndlovu.
OLUNYE UDABA: Umlandeli kamaskandi oshonile wawubona usekude umhlola
Umthombo osondelene nalolu daba uthi udaba lufikile oNyazilwezulu okuvela ukuthi luthe ngeke luye esikoleni ngoba kaluyena uthisha, kunalokho labo thisha makuye bona kulona bayokhuluma lokho abakufunayo.
"Kushubile kulolu daba. Banele bezwa ukuthi sebefuneka eBuhleni bayavevezela. Bafike kwamkhokheli bethi bayoxolisa bekhala zehla ngazimbili izinyembezi. Nokho-ke thina akukho esingabasiza ngakho ngoba udaba selukubaba wethu uNyazi. Baningi abantu abadelela uShembe ekugcineni bavelelwe ngamashwa kube sengathi baloyiwe kanti bazithakathe bona ngezenzo zabo," kusho umthombo.
ILANGA linayo enye yezincwadi ebhalwe ngudokotela ohlole umzimba wengane exetshulwe ngenduku yibona labo thisha baseMakhana. Kubikwa ukuthi uthishanhloko wakulesi isikole, uMnu Sam Tembe, ukhululeke ngaphakathi enhliziyweni ngoba akekho uthisha asebenza naye ongayitholanga incwadi exwayisa ngokuthi bahlukane nokubandlulula abafundi ngokwenkolo, ikakhulukazi abangamaNazaretha.
ILANGA lixhumane nomunye uthisha osolwayo, othe akukho nokukodwa azokuphawula. Lesi sikole siwumakhelwane neZinhlabeni High School eke yaba sematheni ngokuhlukumeza abafundi abangamaNazaretha.
Kulapho khona kungenelele leli phephandaba kwaphetha ngokuthi kube nothisha abashushiswayo. Okhulumela uhlangothi lwaseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, uthe iyakhathaza indaba yokuthi kusenothisha abahlukumeza izingane ngokwenkolo yazo. Unxuse abazali ukuba bangapheli amandla baqhubeke babike ngale mikhuba yokuhlukunyezwa kwezingane zabo.
"Sikhathazekile ngesenzo sokuhlukunyezwa kwabafundi abakhonza ebandleni ngoba le nto iwukubukela phansi igama nesithunzi sebandla," kusho uMnu Mncwabe.
UMnu Nkululeko Mthethwa okhulumela uhlangothi lwaseThembezinhle, uzanywe kaningi kodwa lutho ukutholakala ocingweni lwakhe. Uthunyelelwe umyalezo wangawuphendula. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, usigxekile lesi senzo wathi sihlaza igama lomnyango.
Uthe umnyango ngeke ubeseke ngalutho othisha abahlukumeza abafundi ngoba baqashwe bewazi kahle umthetho wokuhlonishwa kwamalungelo abantu nawabafundi. Utshele ILANGA ukuthi bakhiphe isekhula kuzona zonke izikole zaKwaZulu-Natal bexwayisa othisha.
"Ngonyaka odlule sikhiphe isekhula ezungeza kuzona zonke izikole esifundazweni. Ngeke nangephutha sibeseke othisha abahlukumeza izingane ezikoleni, kunalokho izinyawo zizogcwala udaka. Kangazi ukuthi othisha bayithathaphi le nto yokuthi kufanele kuhlukunyezwe izingane zakwaShembe ekubeni bekwazi ukufundisa izingane ezifake izintambo, amabhengela nokunye,'' kusho yena.
Randburg - 15:47:58 PM QUEUING TRAFFIC towards Jan Smuts Avenue Ezinye zasemigwaqeni